Get emails for this topic UK help and services in Zimbabwe
The British Embassy in Zimbabwe maintains and develops relations between the UK and Zimbabwe.
Zimbabwe: prisoner pack
Explanation of the legal and prison system to British nationals imprisoned in Zimbabwe.
Official information that British people moving to and living in Zimbabwe need to know, including residency, healthcare and driving.
List of English-speaking doctors/ medical facilities for British nationals in Zimbabwe.
Zimbabwe: funeral directors
List of English-speaking funeral directors for British nationals abroad in Zimbabwe.
List of English-speaking lawyers for British nationals in Zimbabwe.
Zimbabwe bereavement: death abroad
Information to help the family and friends of British nationals who have died in Zimbabwe.
Find out about the UK government's diplomatic, security and development work in Zimbabwe.
Updates, news and events from the UK government in Zimbabwe
Includes investing and setting up a business in the UK and doing business in Zimbabwe.
Zimbabwe: consular fees
List of fees for consular services in Zimbabwe.